On izimoto Vaz, bewela ngaphansi esigabeni 'zakudala', kufaka ekhatsi "eziyisithupha" kusethelwe kagesi ukuthungela uhlelo. Ukukhethwa version yayo Ushintshe, okwakubekelwa aboshelwe ohlelweni imininingwane yokuxhumana. Esimweni sokuqala, ikhoyili wasebenzisa ithuluzi B117A grade, kuyilapho ohlobo Ushintshe ifakwe uchungechunge 27, 3705. I-main lolwehlukanisa kokubili kumadivayisi umehluko kwezinye izakhi emazombezombe. Okuwukuphela kwento azishintshile, ngakho-ke "umkhuba" ababevame ukwehluleka (endleleni, ku isimiso esifanayo yakhiwe kanye ukuthungela 2107, "Eziyisikhombisa").
On ukuthungela umndeni umkhonyovu "zakudala"
indinganiso injini ukuthungela inkinobho imisiwe ukuba 'zabuna ", okungatholakali ngokuyisisekelo ukuhluka abameleli yangaphambilini ye Vaz. Ngo design yakhe, kukhona izingxenye ezintathu eziyinhloko:
Kulokhu, uma ekhishwa kudivayisi uhlelo anti-theft, abashayeli kwakudingeka ashintshe lonke uhlelo ifakiwe. Le ngxenye lokuxhumana athambekele e plugs izindlu ungayithola enye eceleni. Ukukhweza kudivayisi isiqalo (ukuthungela) wemoto phezu isitsha sezimbali ezenziwe ngaphansi iphaneli dash, okungukuthi ngaphansi kudeshibhodi (kwesokunxele umshayeli) for yasibamba imishudo kumphambukisa kushaft.
Womathathu la izingxenye kufanele kuqinisekiswe bushelelezi futhi elingenazinkinga isiqalo-up imoto, kuvela kubo kuzoncika isimo kahle sonke imoto. Njengomthetho, umbuzo othi "kanjani ukubeka ukuthungela ku Vaz" (21213 kuhlanganise) abashayeli azinikezi ngaphambili kuka 100,000 amakhilomitha, kusukela ekushoneni castle ngokwalo lisebenzisa ukulethwa nomkhiqizi namanje yokwakha izimoto eziningi. Kodwa uma umbuzo namanje wasesukuma udinga ukuthatha izinyathelo ezithile. Uma isikhathi akusho ulungise ukuthungela, imoto yakho ngeke okungenani outspend fuel, uma kungekhona avale ayisebenzi kahle, ngisho "ku ashisayo".
Izimpawu ebonisa umonakalo ohlelweni ukuthungela ku Vaz izimoto
Ngaphambi ukubeka ukuthungela ku Vaz 2105 (kanye wonke amamodeli), kufanele uqinisekise ukuthi umonakalo ngempela endleleni. Uphawu okungenzeka kakhulu lokhu uma kwenzeka amaphutha inkinobho ukuthungela zingakhiqiza injini ebilayo futhi ngimpofu ukusheshisa Dynamics. Ngaphezu kwalokho, ukuthi ngesivinini aphansi naphakathi ku gumbi uzwa lomsindo wokukhala ehlukile egumbini engine. Okuningi ngesivinini ngifuna ukusho futhi ukuthi idling imoto kungaba Shake kancane, uma ngokungalungile setha noma ilungiswe inkinobho ukuthungela.
Ingabe lo ukuthungela?
Njalo umshayeli abanolwazi uyazi ukuthi izici ezifana motor okweqile, ukulahlekelwa imoto Dynamics, anda petrol ezingase ziphakame hhayi ngenxa enqabeni, kodwa ngenxa eziningi nezinye izinkinga lobuchwepheshe. Lokhu kungaba iphutha ohlelweni fuel, carburetor kabi kushintshwe noma bampofu-izinga uphethiloli. Ngakho-ke, ukuze athole kungaba uphawu ukuthungela iphutha, kubalulekile ukuba banake amakhandlela. Kuyinto ngabo njengoba sikwazi ukuthola ukuthi hlobo luni umonakalo, nokuthi lokho kwabangelwa yini ke.
Ngaphambi ukubeka ukuthungela ku Vaz 2106 abanikazi imoto banake lemali imali engxenyeni zokusebenza ikhandlela. Uma ebusweni inhlabathi zanqwabelana kangaka njengoba kulesi sithombe ...
... ke Yiqiniso, isizathu itholakala ukuthungela. Kukhona-plaque kakhulu kangangokuba ukubuyisela ebusweni ukusebenza kwalesi sakhi incendiary umane akwenzi mqondo. Kungenjalo, emva komsebenzi amahora ambalwa eside futhi kubuhlungu, namanje ngeke uthole kuphi, kanye electrode futhi uzokwanelisa ube yinhlansi e lemali evamile. Njengomthetho, ebusweni ukusebenza ikhandlela nge ezisalayo black oily isivele yokulungisa. Kuyefana nasendleleni ngoba izingxenye ngenhloso ungqimba obukhulu koqweqwe ebusweni zokusebenza. Lezi zingxenye angaphansi esikhundleni kuphela. Kodwa uma usafuna uzame ukubuyisela ukusebenza inhlansi ahlanzekile ipulaki ngokudlulisa, ungakwazi ukwenza manipulations ezilandelayo:
Beka ikhandlela kule-2 noma 3 kanye evuthayo cylinder serviceable. Lapha, izinga lokushisa Ukushisa Kuthi ephakeme, njengoba ezivuthayo uphethiloli emoyeni ingxube ngaphezulu mafutha kunangesikhathi amasilinda 1 no-4.
Yiphathe namatoho sandblasting.
Kwenye indlela ukubeka ukuthungela ku Vaz 2101-2106 akunakwenzeka. Ezinye izindlela, ezifana wokuhlanza ukuthutha metal noma calcination we ebusweni - lokhu nje kuwukuchitha isikhathi, futhi ngezindlela ngeke sifinyelele elamukelekile. Ngakho-ke, ukuze wonge isikhathi siqu, lishintsha amakhandlela isethi.
Kuyadingeka ukuba banake bangaki amakhilomitha amakhandlela yakho babe "babaleka". Uma ezisebenza isikhathi esingaphezu 30 ayizinkulungwane amakhilomitha ke - enikeziwe accumulations yentshede nokungcola - lento ishintshwa kangaki. Ochwepheshe batusa esikhundleni inhlansi esikhiqiza hhayi ngaphansi ezingaphezu kwesisodwa ngonyaka, ngisho noma umshini wokubonisa izinga lejubane uye ukhulise 30,000 phakathi naleso sikhathi. Kodwa noma kunjalo-ke akudingekile ukuba ulinde isikhathi lapho ushiye isakhiwo. Lokhu kungaba ngokuphawulekayo kuthinte isimo lobuchwepheshe imoto, futhi kube nzima nakakhulu.
Spark bafake ekunciphiseni ukuphakama electrode emaphakathi kanye kwesigaba yangaphandle. Phakathi ukusebenza injini ukuphela ezondile le electrode yangaphandle uyabaselwa lokushisa okuyinto eyanele ukuze kuvuswe ingxube ezivuthayo ekamelweni amandla omlilo. Uma woketshezi ibangelwa ube yinhlansi ngokuzimela (inqubo eyaziwa ngokuthi ukuvuvukala ngokungahlelekile), khona-ke umshayeli bangazizwa ephawulekayo injini amandla ukulahlekelwa. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ngisho ne off ukuthungela, injini ayifuni ukuyeka ukusebenza. Lokhu kubonisa ukuthi amakhandlela ukuza yisiphambeko, futhi nabo - okuyinto kungenzeka - bese inkinobho ukuthungela.
Kodwa kanjani ukubeka ukuthungela ku Vaz 2106 kuleli cala?
Kulokhu, kungcono umane esikhundleni inhlansi isiqephu esisha. Kodwa uma unquma bayilungise, zama bagawule ingxenye ivinjiwe of the electrode yangaphandle buyindlela ezifanele. Lokhu akusho ukunqoba ubukhulu igebe suppositories, ibe 0.55 mm. Uma Vaz isebenza uphethiloli 76th, lesi silinganiso uvunyelwe ukuba lenyuke 0.6 kwangu. Kodwa uma igebe likhulu kakhulu, kakhulu nzima injini isiqalo ngenkathi ezibandayo, futhi ngaphezu kwalokho, kuholele ukusetshenziswa abalulekile nophethiloli. Futhi kwenzeka ngoba kwakheka inhlansi is in the electrode ngezinye izikhathi inganyamalala ngaphambi kokufinyelela endaweni yayo yokugcina. Ngoba ikusasa, ithiphu ewusizo: ukugwema zonke izimo ezinjalo, kungcono ukuba baphathe iyiphi isethi entsha inhlansi plugs (futhi mhlawumbe futhi ikhava tramblera futhi isinciphisi). Noma kunjalo, Vaz - lokhu akulona "Mercedes", futhi ungakwazi ukugqashula nganoma yisiphi isikhathi. Nokho, ucishe alungise ne 'nesithupha'. Futhi ufunde indlela ukubeka ukuthungela Vaz 2107-21099, unga kancane.
Njengoba umkhuba ubonisa, kuba umkhiqizo avame ehluleka. Futhi uzinake ukuthi ikhefu akuyona distributor, futhi noma iyiphi isici elincane nomklamo walo. Ngakho, enye izingxenye ezincane kanye alithembekile ibhola 900706U, okuyinto bephethe umqondisi diaphragm cleaner. Ngaphezu kwalokho, cap distributor zingase zephule. Ezimweni eziningi noma ukusonteka ngesimo imifantu, okuzovela ngenxa umonakalo mechanical noma idiphozithi ungqimba lwamafutha ne-graphite. Enye cap distributor ayithandi amanzi, futhi ezimweni ezimanzi kakhulu ehluleka.
Uma une ibhola eziphukile, uzophawula ukuthi motor wayeka "ukudonsa" futhi sizizwe ngendlela azizwa akusebenzi ngaso lutho. Ngokuvamile ulungise okuthile kuleli cala akunakwenzeka. Nokho, uma ufuna ukubeka ukuthungela (e 2114, isibonelo) lapho ngobugebengu distributor cap, ungazama alungise leso simo ngokwenza uchungechunge elandelayo imisebenzi:
Nqamula kusuka hose distributor cleaner.
Ekupheleni kwalo ukuze uzobopha elikasofasilahlane futhi uvikelekile ku-elementi wathi ukuze akusho "hang out" ngesikhathi ezinyakazayo.
Push induku isici cleaner-Equalizer ibha. Uma angahambisani phakathi nesikhathi sokuphela induku eguqa futhi izindlu, bese uzama ukwenza ezintsha ingxenye bese uphinda zokukhwabanisa.
Clearance ukuba full amaphuzu. Kulesi avunyelwe iphutha uhla amamilimitha angu-0.05 kuya 0.35.
In the isinyathelo sokugcina ishiywa kuphela adalule enemininingwane ukuthungela engela (ke ilingana 7 ° 30 ').
Ngakho kungenzeka ukusetha ukuthungela ngoba Vaz 2105-2110 futhi ukubuyela enqabeni ukusebenza kwimodi ejwayelekile. Nokho, nangaphansi kwezimo ezinjalo ngokuvamile kwandisa petrol (amaphesenti 3-5) kanye ezingeni anda CO 2 lokuhlushwa amagesi imoto qeda.
By endleleni, lapho "izimpawu" enjalo "Niva" izimoto Vaz "penny" 'nesithupha' uhambo eqinile inaliti tachometer yonkana ngesilinganiso, kungakhathaliseki ukuthi aba namuphi kweqiniso ijubane lenjini.
Ngakho, ake sibheke indlela ukubeka ukuthungela phezu Vaz-2106.
Njengoba "zakudala" umklamo kanye Vaz "lesishiyagalolunye" lomndeni Cishe efanayo, ungasebenzisa contact imfundo okuphakanyiswe cishe wonke amamodeli we izimoto iVolga endaweni yokukhanda.
Ngaphambi edalula ukuthungela ngoba Vaz 2106-2110, kumelwe silungiselele amabhowudu eziningana (13, 14 no-36 mm) kanye umshayeli lokususa futhi probe usethe ukukala nokusulwa. Usebenzisa isikrufu ku 13 no-14 kwangu, sizokwenza uyasikrufulula iziqobosho tramblora. Sebenzisa ithuluzi 36-mm esinalo ukuvula crank ratchet.
Ngakho, indlela ukubeka ukuthungela phezu 2110? Ukuze uqale, thatha ezandleni ukhiye phezu 36 futhi uyasikrufulula crankshaft ohlangothini ngokwewashi. Spin kudingeka ngokwabo. Kuleli qophelo, kudingeka uhlole ngokucophelela contact in timer. Veza loxhumana igebe elikhulu. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha probe 0.40 amamilimitha angu. Uma ukubaluleka okuholela ayifani obala-ke, igebe kumele kushintshwe. Kulokhu thina ukuthatha ukufakwa kokumqoka kuphela flat, athukulule ngezikulufo ukulungisa contact. Manje, ne ome njengeqanda ukusethwa (ukwanda noma ukuncipha) le imvume. Ngakho ngokwayo Uphenyo kumele ibekwe phakathi nezinqe esinqunyiwe contact izingxenye tramblora.
Njengoba ukulungiswa okwengeziwe yenziwa le ukuthungela?
Vaz-2106 futhi wonke amanye 'abafowabo' sezilungisiwe ngendlela efanayo: emva igebe lokuxhumana uvezwe, ukuze ulungise ipharamitha ebalulekile elandelayo. Manje kudingeka ulungise igebe ukuthungela. Indlela ukubeka ukuthungela phezu 2110? Ukuze wenze lokhu, usebenzisa ukhiye 36 ukushintshanisa ngokwewashi crankshaft isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo kuze kube ngomzuzu lapho uphawu we crankshaft asishayisani ne ezidingekayo kithi notch on isikhathi (isikhathi). Kunezinhlobo ezintathu kuphela. Eyokuqala lisho i-engela degrees 10, owesibili - 5 degrees i ethuthuka futhi owesithathu (yinde kunazo) kuyodingeka cha, kusukela leli phuzu elingenhla efile. Sidinga kuphela uphawu lwesibili.
Emva ukubeka lezi namanani kufanele ihlolwe isilinda kuqala, okuyinto kumele itholakale esikhungweni phezulu efile. Lokhu kungenziwa kanje: uyasikrufulula ipulaki inhlansi uMbhalo, okuyinto etholakala eduze tramblera bese ufaka ukufakwa kokumqoka kuphela emgodini inhlansi ipulaki. Uma piston izoba khona phezulu, uma ukufakwa kokumqoka kuphela uyama ngokumelene nalo. Uma kungenjalo, vula isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo crankshaft 360 0 wayesesibeka kwilebula.
Nakani! Ukuze kahle ukusetha ukuthungela Vaz 21213 (isimiso, njenganoma iyiphi enye imoto) kufanele kube abandayo ngoba lokushisa kunomthelela ukubukeka amaphutha. Ngisho nalapho enza le misebenzi kufanele kuphawulwe ukuthi crankshaft ungakwazi azungeze 360 kanye camshaft - 180. kuphela Kuyinto ngenxa lesi sici sesihlahla piston kuzoba yokuma iphuzu phezulu.
Ngesikhathi sigaba esilandelayo sizobe badinga 12 engama-volt angu ukukhanya isibani 2 izintambo soldered. Omunye wabo thina ukuxhuma "isisindo" imoto (emzimbeni noma injini), kanti eyesibili ixhunywe pin tramblera.
Wokwenziwa kweengaba zokugcina
Ngaphezu kwalokho, ngeke babe nezinkinga kanjani ukubeka ukuthungela (Vaz 21099, 2114, 2115, noma 21213 - akunandaba, isimiso yokusebenza Usenguyena). Ngosizo 13-mm Spanner uyasikrufulula izakhi yokuxhuma last izingxenye ezibalwe ngenhla bese uphendukisa kubo nje izibani isibani up. Lesi sakamuva akufanele zikhanyise ngokugcwele, kodwa kalufifi kuphela. Uma uxhuma umlilo ngokushesha ubanjwe ke timer kufanele akhanyiswe ngokwewashi lize lize uyaphuma. Uma lokhu livelile, kubalulekile ukubamba isikhathi lapho isibani izokhanyisa kalufifi. Khona-ke kuyoba khona kusengaphambili inhlansi, futhi siyoba emuva qinisa fastener, ukubeka isivalo bese uqale injini. Zonke umsebenzi "kanjani ukubeka ukuthungela Vaz 2103-2110" ixazululwe.
Ukulungisa Vaz 2106. Indlela ukusetha ukuthungela? Inombolo Indlela ezimbili: sebenzisa stroboscope
Ungaya enye indlela. Kulokhu, sidinga ukusungula igebe contact full incane. Ngemva tramblera cap isusiwe, usebenzisa ukusonta kufanele ufake crankshaft esimweni lapho igebe wawuzoba seqiwe. Manje uyasikrufulula a isiqhebezo umshudo e plate eziveza kanye uphenyo elihambisana khetha isikhundla, okuyinto ilingana ukufuduka yayo lula. Ngaphezu kwalokho okudingeke ukuba qinisa screw emuva futhi uthole uphawu injini. Ingabe 0, 5 no-10 degrees. On the usebe we isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo crankshaft likhona mshini efanayo. Manje thina adalule ukuthungela.
Phela le misebenzi ukuthatha ezandleni idivayisi ekhethekile - a stroboscope. Ngosizo lwawo ukwenza lolo shintsho. Kodwa ngoba usebenza ithuluzi kusukela amapayipi, kufanele pre-exhunywe kwi-izintambo amandla webhethri. cleaner hose lokulinganisa Kulokhu kumele icime. Manje siqala injini bese ulinda kuze ijubane kokungenzi lutho liyoqina. Ngemva kwalokhu tramblera kancane buthaka okunamathiselwe (ukuze crank kuso). Ngaphezu kwalokho inhloso stroboscope ku umaka ivuliwe injini futhi division of 5 degrees, ukuze adalule ukuthungela kuyinto 92 octane uphethiloli. Uma une Vaz "umndeni okweshumi", bese adalule Igebe 0 degrees. It yenzelwe ukusetshenziswa uphethiloli nge isilinganiso octane 95 noma ngaphezulu. Phela lezi manipulations ungakhohlwa qinisa Ilokhi emuva. Nokho, kulesigaba angabhekwa umbuzo "kanjani ukubeka ukuthungela (e 2104 e Umq. H.) Ukusebenzisa strobe" ivaliwe.
Esikhathini isithombe ngakwesokudla ungabona ukukhanya strobe esenzweni. Ngezansi sibheka indlela ukusetha ukuthungela Vaz 2111-2106 ngaphandle strobe.
Uma une ngakwesokunene akaphathwanga amadivaysi, ungakwazi engqondweni, ube isibani 12 engama-volt angu. Noma kunjalo, uzodinga izintambo ambalwa. Ngokufanayo, njengoba kuchaziwe ngenhla, ngeke ukupheqa ngokusebenzisa crankshaft kuyadingeka yokukhipha amalebula kunesidingo. Ngemva kwalokho wire omunye isibani kumele exhunywe kwi-tramblera ikhoyili. I wire wesibili kuyodingeka "isisindo".
Sidinga uvule ukuthungela. Kuze kube yimanje, siba buthaka wire futhi. Okulandelayo ukuthola isikhundla lapho voltmeter sizobonisa amanani ngokwesilinganiso. Ngesikhathi esifanayo akuvumelekile ukuthi ukukhanya uyaphuma noma kukhanya kuxhopha kakhulu. Khona-ke emuva ukulungisa umshudo kanye ukusetha isibali kuyo leyo ndawo. Khumbula ukuthi udinga athambise screw hhayi ningi than 2 ematfuba.
Ngomqondo onabile, zonke izindlela ngenhla ziholela umphumela ofanayo. Futhi noma yini enye ungazange usebenzise, wena-ke namanje at the ophumayo uzobe kabusha ukuthungela. Umehluko phakathi nezinqubo Nokho, akuzona abalulekile kakhulu, njengoba ukwakhiwa Vaz umndeni "okweshumi" noma okufanayo "zakudala". Ngakho-ke, ukusebenzisa zonke izindlela ulungise ukhiye ukuthungela kungaba cishe noma yikuphi imodeli, uthome "amapeni" edume kuya "Lada Priora".
Qhubekela phambili. Indlela ukusetha ukuthungela (2115 iyathinteka), siye kakade ezitholakele. Kodwa ingabe ziyabasiza ngempela abathintekayo umsebenzi we yangaphakathi omlilo engine? Yeka indlela abaphumelela kahle abavezwe izikhala, sifunda on the fly. Ngenxa yalesi kubalulekile ukuxoxa yokusebenza lokushisa injini Vaz 85 degrees Celsius (ngisho nalapho kuhlangana khona inaliti ungaphakathi esikalini enombala oluhlaza okotshani) ukuthola elula bushelelezi futhi iqonde kusho uWicks.
Thanda test ukushayela
Ngemva yangaphakathi omlilo injini uye sekuqala ukufudumala kuya lokushisa edingekayo, ukushiya ithrekhi futhi ohlakaziwe amakhilomitha ngehora 50. Kuyadingeka ukuba ushintshele ku igiya lesine futhi ngqo ibenze isinyathelo igesi kuya phansi. Uma ngalesi sikhathi uyolizwa clatter onokuthula esifushane, uyojabula: lokhu kubonisa ukuthi ukuthungela uzibekela kahle. Kulokhu, isikulufa the ngokwewashi isivalo tramblera futhi Ride ngesibindi, lapho inhliziyo yakho ekushoyo, noma ngasiphi ibanga. By the way, umndeni Vaz "zabuna" ngokwanele kakade batshalwa 40 amakhilomitha ngehora kanye ushintshele ku igiya lesine.
Ngo ngokuqhutshwa kohlelo sidilize ... Uma ngesikhathi abukhali ngokucindezela igesi kwisitezi nawe uzizwa ukuthi umsindo ophakeme uzilimaza futhi ehlukile, niyazi, kuthiwa yonke kulungiselelwa ayilungile. Lokhu futhi kufakazelwa izici ezifana injini okweqile, amandla ukulahlekelwa noma ukwanda kwemithwalo ukusetshenziswa uphethiloli. Ngenxa yalokho, thina emuva umbuzo kanjani ukubeka ukuthungela Vaz 2108-21099.
Ngeshwa, zonke izixazululo kungenzeka inkinga esixoxe ngazo kakade. Kodwa-ke akufanele phekula, ngoba ngisho kusuka isimo esisongela ukuphila singakwazi njalo ukuthola indlela yokuphuma. Ngakho, wenzani uma umsebenzi awuzange kwenziwe ngendlela efanele? Ngomqondo onabile, inkulumo kwesixazululo eqiniso okumelwe awenze, banxuse esiteshini yesondlo. ngezisebenzi eziyizingcweti nangezinto abanolwazi bazokwazi ngokushesha nangokunembile ukusetha ukuthungela (at 2104 kanye nanoma yiziphi ezinye imodeli). By endleleni, le nsiza kuzodlondlobalisa abiza ngempela ashibhe, oda ruble angamakhulu amaningana.
Manje wazi kahle ukuthi ukubeka Vaz ukuthungela 2108-21099 (ngezandla zabo, ngasendleleni). Ngokuphathelene izindlela nezindlela shintsho wathi, uqaphele into eyodwa: umphumela Ukuphela kwezinto zonke nemsebenti kuyoba okufanayo. Ngakho-ke, umehluko oyisisekelo phakathi lokho okukhethiwe ngoba ukulungisa ukuthungela, ayikho nje. Into kuphela kufanele sinake Kuyaphawuleka ukuthi usebenzisa stroboscope ukubeka imvume edingekayo lula kakhulu. Futhi-ke, ngaphandle lokuloba lapha wena ungenzi lutho.
Lada Kalina - Izibuyekezo umshayeli imfundamakhwela, zama isimangaliso Russian ubuchwepheshe
Indlela imfashini elingenamikhono uncamela brand adumile?
Izidakamizwa "inosine pranobex"
Foot ukhunta: yini okufanele uyenze futhi kanjani aphathwe
Enn Uord - ubuhle nokuphikelela kwamenza
Izinguquko kwinqubomgomo Russian uMbusikazi uCatherine I. neminyaka uhulumeni, ezifuywayo angaphandle